SIDA LOO FAAFIYO ORCHID GURIGA DHEXDIISA IYADOO LOO MARAYO PEDUNCLE: SIDA LOO DOORTO FALLAADHAHA, SIDA LOO GOOYO LOOGUNA DHAJIYO WEEL BIYO, MARKAAD U GUDUBTO DHERIGA? - SOOSAARKA DALAGGA
Talada loogu talagalay dadka jecel kuwa orchid: sida laysugu dhufto guriga iyada oo loo marayo jirida ubaxa. Xeerarka aasaasiga ah iyo talooyinka
Marka orchid ka muuqato beerta ubaxa - waxay u egtahay mucjiso yar, warshad naadir ah oo guriga naadir ah waxay isbarbar dhigi kartaa quruxda iyo kalsoonida. Sida caadiga ah, isla markaaba ubaxu wuxuu noqonayaa mid aan ku filneyn, waxaa jira laba siyaabood oo ka baxsan xaaladdan: iibso warshad qaan-gureed oo kale ama isku day in aad dacaayadiso orchid-kaaga guriga.
Xitaa loogu talagalay floristka ugu khafiifsan ee ikhtiyaarka ah ikhtiyaarka labaad waa xiiso aad u weyn. Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu kori karo orchids. The ugu fudud oo ugu kalsoonaan karo iyaga waa dhalmo iyada oo jirida ubaxa.
Waa maxay dhalashada ubax?
Inta lagu jiro xilliga ubax, orchid waxay soo saartaa jirida ubaxa, biqil dheer oo toosan, kor loo xoojiyay ama iftiinka. Waxaa ku yaal in burooyinkeeda la aasaasay, taas oo markii dambe la ubaxyo ubaxyo cajiib ah, kuwaas oo ah kibirka ugu weyn ee geedka this.
Marxaladaha ugu horeeya, waxay ku dhowdahay in la kala saaro ubaxa asalka hawada., labaduba waxay bilaabaan inay koraan marinka caleenka iyo jirridda, waxayna u muuqdaan kuwo isku mid ah. Farqiga wuxuu noqonayaa mid muuqda marka geedi socodku gaadho dherer ah dhowr centimitir.
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka habka taranta
Marka ugu horeysa waa mid aad u xiiso leh in la soo saaro orchids, badanaa waxay ku xiran tahay habka taranta loo doortay. Xaaladdan, faa'iidooyinka aan la diidin:
uma baahna waayo-aragnimo iyo aqoon fara badan;
uusan waxyeello u geysanin warshad qaangaar ah;
burooyinka dushooda ku yaala ayaa kor u kici kara naftaada;
dhirta intooda badan ka dib si guul leh ku guulaysteen.
Si kastaba ha ahaatee, waa inaad illowdaa tiro ka mid ah sifooyinka taranka oo loo marayo stem ubaxa:
ubaxa loogu talagalay faafinta waa inuu ahaado qof weyn oo si buuxda loo sameeyay, waa in uu leeyahay ugu yaraan afar caleemo oo buuxa;
warshadda waa in aysan aheyn kuwa jirran, daciifay ama ku faafay dulin;
nidaamka xididka waa in uu ahaado mid caafimaad qaba isla markaana buuxiya dhammaan baahida orchid;
loogu talagalay dhalmo, oo kaliya peduncle cusub oo leh dhowr burooyinkeeda nool oo ku haboon.
Xeerarka aasaasiga ah
In kasta oo xaqiiqda ah in geedi-socodka dhalashada ee orchid ayadoo la kaashanayo jirida ubaxa waxaa loo tixgeliyaa sida ugu fudud, waxay u baahan tahay in si adag loo ilaaliyo xeerarka, haddii kale natiijadu waxay noqon kartaa mid aad uga fog.
Cadaadiska waa arrin ku bilowda geedi socodka beddelidda burooyinkeeda hurdada ee ubaxa ubaxa geedka cusub.
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la ilaaliyo xaaladaha lagama maarmaanka u ah xilliga taranka.
Heerkulka waa inuu ka sareeyaa qolka, oo aan ka hooseeynin +25 digrii. Laguma talin in la dhaafo calaamadda +30 digrii, waxay u egtahay in ay horseedi karto kulaylka iyo dhimashada suurtagalka ah ee geedka.
Waraabinta waxay ubaahantahay in la yareeyo laba jeer bishii.
Qoyaan waa inay ahaataa mid sare - 60-80%.
Si aad u isticmaasho dharka sare iyo bacriminta si adag laguma talinayo.
Muddadii ugu fiicnayd ee taranku waxay ka bilaabantaa dhammaadka Febraayo ilaa bilowgii xagaaga. Waxay ahayd muddadaa in fursadaha guusha ay aheyd mid weyn.
Haddii xitaa la socdo xaaladaha oo dhan, baraarugidda kelyaha ayaan la gaarin waxaad isticmaali kartaa cytokinin pasteoo laga iibsan karo dukaanka ubaxa. Tani waa wakiil hormonaal ah oo kicin kara koritaanka iyo qaybinta unugyada cusub.
Talooyinka iyo iska horimaadyada
Isku xirka Cytokinin waa kicin waxtar leh oo kicin kara burooyinkooda hurdo leh, kicin kara koritaanka iyo in la nadiifiyo dheef-shiid kiimikaadka, iyo sidoo kale caawiyo dib u soo celinta nolosha caadiga ah ee warshadda ka dib marka walbahaarka la dareemo.
Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan isticmaalin, waa inaad si taxadar leh u akhridaa tilmaamaha isticmaalka oo hubi inaad tixgelisid khilaafka suurtogalka ah.
Talooyin loogu talagalay isticmaalka:
baasto diirran ilaa heerkulka qolka;
doorto dhawr nooc oo caafimaad leh oo ku yaal peduncle (aan ka badnayn 3!);
adoo isticmaalaya maqaar ama dharbaaxo, kala saar duubka sare ee wareega ah;
geeddi-socodka ayaa la furay biyo, ka dibna codso cytokinin paste xitaa daaha.
Caqabadaha ugu waaweyn:
orchid ayaa dhawaan la dhajiyey oo la qabsashada dhulka cusub weli lama dhammeystirin;
dhirta waxaa loo geystay cudurka hypothermia, daciifiyay ama ay waxyeelo u geysato noolaha waxyeellada leh;
aad u yaryar, dhir aan habooneyn.
Haddii dhammaan talooyinka lagama maarmaanka ah la raaco, Natiijadu ma qaadan doonto waqti dheer, isbeddelka ugu horeeya ee la ogaan doono todobaad gudahiisa.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan cytokinin paste iyo isticmaalka loogu talagalay baraaruga kelyaha:
Tilmaamaha Tallabooyinka Tallaalka Tallaabo-tallaabo
Aan ka fekerno faahfaahin dheeraad ah sida orchid loo faafin karo ubaxa guriga dhexdiisa.
Doorashada caleemaha ubax xaq u
Waxay ku xiran tahay doorashada saxda ah ee ubaxa saxda ah ee sida ugu guulaysata geedi-socodka taranku noqon doono. First of dhan waxaa muhiim ah in orchid caafimaad qabto, xoog leh oo si buuxda loo sameeyay.
Dhererka peduncle wax badan ma ahan, illaa iyo inta uu ku yaryahay nuucyada hoose ee nasashada.
Gooyada waxaa lagu sameeyaa mindi fiiqan ama shuban fogaan ah oo ku saabsan qiyaastii 3 cm oo ah asliga ah.
Dhejinta geedka qaangaar ah waa in lagu daaweeyaa dhuxusha dhaqdhaqaaqa leh ama antiseptic.
Qaybaha hoose waa in lagu daaweeyaa cytokinin paste, sida kor ku xusan.
Mustaqbalka, nidaamku wuxuu u baahan doonaa in lagu celiyo toddobaadkii hal mar.
U soo daadi weel biyo ah
Mindhicirka diyaarsanaa waa in lagu dhejiyaa weel hufan oo biyo ah heerkulka qolka, tusaale ahaan, dhalada caag ah oo leh qoortan la jarjaray ama dhalo.
Biyaha waa inay daboolaan jarista ilaa 5 sm.
Qeybta hoose ee taangiga waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo kiniin ah kaarbiidka firfircoon, haddii la rabo, waxaad ku dari kartaa Bacriminta macdanta 1/4 of concentration of.
Biyaha waa in si buuxda loo bedelaa usbuuc kasta.
Caleemaha soo baxa waxay u baahan tahay heerkul sare (oo aan ka hooseeynin +25 digrii) iyo qoyaan.
Si loo ilaaliyo shuruudaha ugu wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro aqalka dhirta lagu koriyo (tusaale ahaan, adigoo isticmaalaya bac caag ah) oo ku rid meel diiran oo wanaagsan.
Waxaan soo bandhigi karnaa daawashada fiidiyowga ku saabsan abuurista aqalka dhirta lagu koriyo oo loogu talagalay biyo dhalaanka orchids:
Goorma ayaad u baahan tahay inaad ilmaha ka saarto fallaadha?
Marka 2-3 caleemo ka soo baxdo kelyaha toosan iyo xididdada hawada dhowr ah waa ugu yaraan 3 cm dheer, ilmaha ayaa diyaar u ah transplanting galay dho gooni ah.
Dhaqdhaqaaq fiiqan leh weel fiiqan ama xiirid manjooyin ah waa in laga soocaa peduncobka, taasoo ka dhigaysa qiyaastii 1 cm cidhifyada.
Saliidu waxay u baahan yihiin in la shaqeeyo oo u oggolow in ay qalajiyaan 2 saacadood ka hor inta dhulka laga beerin.
Waxaan soo bandhigi karnaa daawashada fiidiyowga ku saabsan kala-soocidda carruurta ee orchid ka soo jeeda baraha:
U dhaqaaq dhaqaaqga
Wixii beerta ubaxyada orchids waxay u baahan yihiin weel yar oo caag ah oo leh dhexroor ah 10 cm.
Meelaha dufan ee dheriga waa inaysan ku dhicin oo kaliya dhinaca hoose, laakiin sidoo kale dhinaca dhinacyada, taasi waxay xaqiijineysaa in qoyaanka aan ku urursaneynin substrate, iyo geedi socodka xididku wuxuu ku guuleysan doonaa.
Hannaanka loo dego:
Dhererka dheecaanka qiyaastii 3 cm dhumuc ayaa lagu dhejiyaa hoose ee dheriga, waxay ka kooban tahay jajabyo waaweyn oo dhexdhexaad ah iyo dhexdhexaad ah.
Cadaadiska wax yar ku dul rusheeyaa substrate.
Warshad waxaa la dhigayaa bartamaha, ka dibna si tartiib ah ku rusheeyaa goobada carrada ilaa dheriga si buuxda loo buuxiyo.
Waa inaad hubisaa in hulalka oo dhan si ammaan ah looga buuxiyo ciidda.
Warshadda dhalinyarada waa in lagu dhex daro substrate qoyan.. Waraabinta soo socota waxaa lagu fuliyaa qiyaastii laba maalmood, ka dibna - sida hoos u dhiska substrate. Si ay u noqoto mid guuleysi ah, dheri leh orchid yaryar waa in lagu rakibay aqalka dhirta lagu koriyo, kaas oo lagu rakibay meel diiran oo wanaagsan.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan beeritaanka ilmo-orchid ee subagga:
Daryeel dheeraad ah
Ka dib markii dhowr caleemood cusub soo muuqdaan warshad dhalinyaro ah, aqalka dhirta lagu koriyo ayaa laga saari karaa. Tani waxay ka dhigan tahay in dhirta ay si guul leh u rogrogmeen ayna noqdeen kuwo madaxbanaan Xeerarka ilaalinta isaga kama duwana shuruucda daryeelka ee geedaha qaangaarka ah:
heerkulada la doorbiday + 18-24 digrii;
qoyaanka hawada 60-80%;
mudada maalinta waa inaanay ka yarayn 10 saacadood, hadday lagama maarmaan noqoto, iftiinka dabiiciga ah wuxuu ku xiran yahay macmal;
waraabinta waxaa lagu sameeyaa adoo adeegsanaya sida substrate u dillaacaan 2-3 jeer toddobaadkii, xilliga jiilaalka xoogaa hoos u dhacaya 2-3 jeer bishii;
Nidaamka wax soo saarka ilmo-soo-saarista adoo adeegsanaya peduncada soo bandhigaya wax dhib ah oo gaar ah.waa ku filan tahay in la fuliyo markii ugu horreysay, iyadoo la raacayo dhammaan xeerarka iyo tilmaamaha, mustaqbalkana ma sii wadi doono walaac, iyo beerta ubaxa oo dhan ayaa dhawaan u muuqan doona goobta xayawaanka kulaylaha ah.